> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Verizon Xiriirada inay iPhone
Sidaas ayaan lahaa taleefankiisa Samsung Charge Android la Verizon, qiyaastii 16 bilood ee lasoo dhaafay. Wixii tiro ka mid ah sababaha Ma u baahan tahay si aad u hesho, waxaan go'aansaday in ay ahayd waqti inuu u wareego ama laba, oo sidaas ayaan u go'aansaday inaan ku iibsan iPhone la AT & T. Si kastaba ha ahaatee waxa anigu ma aan garanaynin waa sida kaliya aad u koobnayn fursadaha ii noqon lahaa degaanka ee wareejinta badan xiriirada ka phone Verizon in an phone AT & T. Marka qof ogtahay si kasta oo kale oo fudud ama wax-ada kale ee aan isticmaali karto si aad si fudud u soo guuraan xiriirada aan ka phone Verizon si cusub AT & T iPhone? Thanks.
Xoqo madaxa marka aad iibsato iPhone ah, sida iPhone 6s, xiriirada ayaa weli ku jira telefoonka jir Verizon? Xaaladdan oo kale ah, in aad si ay u gudbiyaan xiriirada Verizon si iPhone hor inta noloshaada iPhone. Su'aashu waxay tahay waxa aad samayn karto si aad u dhamaystirto xiriir kala iibsiga Verizon ah? Ha welwelin. Maqaalkani waxa aad barayaa 2 siyaabaha ay u gaarto goolkii.
Habka 1. xiriirada dhoofinta Verizon sida CSV oo u hagaagsan in iPhone
Habka 2. Transfer xiriirada ka phone Verizon si iPhone
Haddii aad telefoonka jir Verizon waa casriga ah, waxaad kala socon kartaa habkan. Saxiix in aad xisaabta Verizon in ay helaan Kaaliyaha Back. Dooro xiriiro. In liiska jiido-hoos, dooro Save sida Type, oo ay doortaan in ay badbaadin xiriiro sida file CSV ah.
Markaas, saxiixa shubo xisaabta Google, geliyaan file CSV ah. Markaas, Lugood furan oo ku xidhi aad iPhone in kombiyuutarka via cable USB. Riix si aad iPhone hoos Qalabka si ay u muujiyaan wada hadal ku saabsan xaq. Riix Info on line ugu sareeya. Sax nidaameed Xiriirada leh iyo dooran Google Xiriirada. Riix codso. Sug ilbiriqsi. Markaas, xiriirrada Verizon noqon doontaa iPhone.
Habka 2. xiriirada Transfer ka phone Verizon si iPhone
Haddii xiriir ah ayaa weli ku jira telefoonka Verizon, waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalab kala iibsiga telefoonka ah in aad gacan u siiyaan. The Wondershare MobleTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac , qalab kala iibsiga phone hal-click, waa fiican in arrinta kala iibsiga telefoonka. Waxaa aad u saamaxaaya in ay u gudbiyaan dhammaan xiriirada ee telefoonka Verizon socda Android, macruufka ama Symbian si iPhone la AT & T, T-mobile, Verizon, iwm 1 click.
Download Wondershare MobileTrans iyo Raacno Hanuunka waxaa hoos ku qoran oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Verizon si iPhone la version Windows ah.
The version Mac ma taageeri dhaqaaqin file kasta oo ka Nokia (Symbian) phone in iPhone. Intaa waxaa dheer, in labada version si buuxda u taageersan iPhone 6s (Plus) 6 (Plus), iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 5, iPhone 5s, 5c iPhone in ay maamulaan macruufka 9/8/7/6/5.
Tallaabada 1. Daahfurka qalab
First of dhan, abuurtaan Wondershare MobileTrans ka dib markii ay kaalinta rakibo. U hubso in aad ku rakibtay Lugood on your computer. Haddii aan, waxa ay haatan u soo dajiyo. Markaas, guji Phone in Transfer Phone si ay u muujiyaan suuqa kala iibsiga telefoonka.
Tallaabada 2. Isku telefoonka Verizon iyo iPhone
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan labadaba phone Verizon jir iyo iPhone in kombiyuutarka. Qalabkani waxa uu ugu dhaqsaha badan nuqulkiisa doonaa, markaas, waxaad arki doontaa labada telefoonada ee suuqa kala iibsiga telefoonka. Haddii aad qabto wax xiriir ah oo ku saabsan iPhone, waxaad tirtiri kartaa oo dhan oo iyaga ka mid in keliya maahee xiriirada ka phone Verizon adigoo sax ku data Clear hor nuqul . Hubi in xiriir waa waxtar lahayn.
Tallaabada 3. Nuqul Verizon xiriirada si iPhone
Just sii Xiriirada hubiyaa. Markaas, bilowdo kala iibsiga xiriir ah adigoo gujinaya Start Copy . inta lagu guda jiro oo dhan, si loo hubiyo phone ma muhu.
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone in G2 LG
Sida loo Delete Bookmarks on iPhone
Sida loo dayactir iPhone Blue Screen of Death
Sidee si ay u gudbiyaan Music inay jailbroken iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Video ku iPhone
Sida loo Print Notes ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS